Lobọchị atọ nke Bariloche - Argentina - 1aviagem.com
Previous post: Ndị Mayan na amụma njedebe nke ụwa - Mexico
Next post: Oke iwe - Brasilia - Brazil
Edebere 22 April 2020 site Römulo Lucena
Itbọchị njem ụbọchị 3 maka Bariloche - Argentina
N’oge a na-adọpụ iche, ọ dịghị ihe dị mma karịa iwere ọba ochie na ilele foto. Nke kpọghachitere m njem mbụ m na Bariloche, nke dị na Argentina.
Anọ m naanị ụbọchị 3 n'obodo ahụ, ma jisie ike ijide ọdụ abụọ. Anyanwụ na snow. Ee ee, foto ndị a dị na post a bụ nke ejiri igwefoto izizi m… ihe dịka afọ 10 gara aga. Ekpebiri m na agaghị m emetụ ha aka, m ga-ahapụ tartlets, na-acha ọcha, mgbe echiche niile gachara ịkọ edemede ahụ, ọ ga-eju gị anya etu obodo si maa mma karịa foto. Ọ bụ amara! soro ụfọdụ foto n'okpuru.
Kedu ihe ị ga-eme na ụbọchị 3 na Bariloche?
1- Gaa Leta Ozi Nleta Ndị njem.
O yiri ka o doro anya na ị ga-enye nke a dịka mbido mbụ nke ihe ị ga-eme na obodo ndị njem nleta. Ma e wezụga ozi ndị njem na ihe na-eme n’obodo ahụ, e nwere ihe ọzọ kpatara nke ahụ. Ebe njem nleta nke Bariloche bụ ebe obere ụlọ ngosi akara ngosi ahụ dị, ma ọ bụ karịa, ụlọ ebe nnukwu ọnụ ụlọ obodo na ebe ndị njem nleta dị. ọ bụ ebe ị nwere ike ịhụ na foto. Lee foto ndị a.
2- Ebe ngosi nka nke Patagonia Francisco Perito Moreno
Ugbu a i nwetarala ihe ndị njegharị na maapụ obodo, ntụnye m na-atụ aro bụ ka ị gaa ebe ngosi nka nke Patagonia Francisco Perito Moreno. Ihe kpatara ya bu na odi n ’akuku nke ndi njem nleta ma sokwa n’ulo a.
Kedu ihe ọzọ, site n'ime nke a, ị ga - enyere aka idobe ebe ọzọ, nke bụ Nahuael Huapi National Park. Aha onye ngosi nka bu onye guzobere ya: Francisco Perito Moreno. Ọ bụ onye nwere ọhụhụ gafere oge ya. (Ma nwee ezigbo ọgaranya)! Nanị, o nyere ala nke o nwetara, na nso Ọdọ Nahuel Huapi. Ọdọ mmiri a dị 550 km² nke anyị hụrụ Ugwu Andes na-enwu enyo ma bụrụ otu n'ime ala mara mma na Argentina. O chere echiche banyere ihe ndị a: Mgbe m nwụsịrị, gburugburu ebe a niile, ọdịdị ala a ga-akwụsị ịdị. ọganihu ga-eme ka e wuo ụlọ, ice ga-agbaze, ọdọ mmiri ga-emebi, ọ ga-akwụsịkwa. Yabụ, iji chekwaa ihe ndị a niile, maka ndị dị ugbu a na ndị na-abịa n'ihu, mụ na gọọmentị Argentine ga-agba nkwekọrịta, na m nwere ike inye ala ndị a, ma ọ bụrụhaala na ha na-agba mbọ idobere mpaghara a dịka ogige nchekwa gburugburu ebe obibi. Ọ bụkwa ihe o mere. Francisco Perito Moreno bụ onye ọkachamara gburugburu ebe obibi ma nwee nke ahụ n'ezie. Edebere nkwekọrịta ahụ yana Gọọmentị Argentine na-elekọta ya ruo taa. Ọ bụrụ na ịmara ịma mma eke Bariloche, gaa na ụlọ ebe ngosi nka ma nye aka idowe ogige a.
3- Nahuel Huapi National Park
Ọ dị mma, ugbu a ịmara akụkọ banyere ogige ahụ, kedu maka ịga leta ya?
Ogige ahụ sara mbara sara mbara, ọ dị ihe dịka 60 kilomita ogologo ugwu Ugwu Andes. Ọ ga-ejikọ ya na Chile, nke mpaghara Patagonia nke Argentine. Bariloche bụ obodo ukwu dị n’etiti ogige a. (Ee, nke bụ isi, enwere obodo na ógbè ndị ọzọ na mgbakwunye a).
Ogige ahụ nwere mpaghara atọ dị iche iche doro anya: ugwu ugwu, oke iru mmiri na steepụ Patagonian. Kwesịrị ịlele. Na mgbakwunye na sauna na osisi dị iche iche na mpaghara ahụ, ọ nwekwara ugwu mgbawa, ọdọ mmiri, glaciers na nhọrọ njem dị iche iche. Ọ dịkarịa ala, otu ụbọchị ka ịchọrọ ileta, ebe ọnọdụ dị anya site na ibe ha ma enwere oge ntinye na ụzọ ọpụpụ. ozi ndị ọzọ na: http://www.nahuelhuapi.gov.ar/turismo/circuitos_auto.html
N'ezie otu n'ime ebe kachasị mma m nwetụrụla. bụ ebe enwere ebe egwuregwu egwuregwu zuru oke na Argentina. Ekewara ebe anakpo ski site na ogo ihe isi ike (enwere ihe kariri 50). Zọ kachasị mma iji gaa ebe ahụ bụ site na ịtọọ oge na oriri nke ụlọ nkwari akụ gị ma ọ bụ ụlọ mbikọ. Yabụ bọs na-abịa n'ọnụ ụzọ ụlọ oriri na ọ andụ youụ ahụ ịkwesighi ịdị oyi na-eche. Ebe a bụ maka eme ski. Mana, ọbụlagodi na ị chọghị, m na-akwadosi ike ịga. Gbanye ụgbọ ala USB. Nlele si na elele na - ekpuchi ugwu, ugwu, ọdọ mmiri, N'ezie Bariloche. Aga m etinye foto m nwere. Ma saịtị nke ugbua n'ihe mkpuchi ahụ nwere foto nke ihe m na-ekwu. Ọbụlagodi na ọ bụghị na oge snow, ihe nlere si ebe ahụ na-adọrọ mmasị. Gaanụ m, echiche ahụ ga-abanye na isi gị, mee ka ị chefuo nsogbu ndị ahụ. (Naanị echefula oyi hahaha).
O nwere ike ime na elu steepụ ahụ mechiri, n’ihi oke ikuku, oke snow, ma ọ bụ mmiri ozuzo siri ike. N'ihi nke a, emechiri mmechi iji zere ihe egwu. Ma ọ bụrụ n’ezie ị dị obi ike ịgbazị ice, a na-enwekwa ice ice ime ụlọ na Bariloche. Ọ na - eje ozi iji mebie obi.
Muselọ ihe ngosi nka a dị iche na nke mbu, lee ebe a na - elekwasị anya na fosil. Afọ 150 ruo 300 gara aga. Na njedebe ị ka nwere ike imetụ ihe okike dinosaur n'aka. Ọ dị nso na Civic Center kwa, ịnwere ike ịga ụkwụ.
6- rie mmanya, wineụọ mmanya ma rie chocolate
N’ezie, iji nwee ike idi oke a, ị ga-eri nri nke ọma.
A makwaara Bariloche n'ụwa niile maka chọkọleti ọrụ aka ya, ndị biya nka, mmanya mmanya, ndị ọrụ aka Parrillas, hamburgers yana ihe niile ị na-eri bụ aka ọrụ. Mee ya, na-enweghị iwu ịtụ anya. M na-ekwukarị na Bariloche bụ obodo ịhụnanya. Na mgbakwunye na inwe ọdịdị dị egwu, ọ ka dị oyi, ọ nwere chocolate dị ọkụ, alfajor, mmanya na-atọ ụtọ, biya ... Ebe a maka anyị, honiimuunu ebe ahụ adịghị njọ. Ma ọ dị ọnụ ala karịa ịga Europe, ndị ọrụ ahụ na-amatakwa ihe nri gị, na ihe ọ bụla ị na-eri n’ebe ahụ na-atọ ụtọ. Ọ bụrụ n ’ị chere na Euro dị oke ọnụ (ee ee, ọ bụ!) Hụ ole Peso nke Argentine dị ... N'ezie ebe a na blọgụ anyị nwere nkwupụta niile maka gị ịgbaso ego na:
7- Gaa Katidral San Carlos de Bariloche
Katidral a, a na-akpọkwa: Nossa Senhora do Nahuel Huapi nwere ọrụ owuwu na-ewu ewu. Ọ bụ ụdị neo-Gothic. ya na ụka dị n'ụdị obe, na-anọchi anya Iso Christianityzọ Kraịst. Ebe isi ya na-ezo aka kpọmkwem n'ebe ọwụwa anyanwụ. Emere nke a nke mere na a na-enwu Katidral ọkụ ụbọchị ahụ. Ma ìhè anyanwụ ahụ ga-abụ ihe ga-eme ka enwu gbaa n’ọkụ, na-eme mmegharị n’etiti ìhè na onyinyo site na enyo achiri anya.
8- Knowingmara snow
N'oge a, amaara m na ị chọpụtala na Bariloche ọ na-enwe snow mgbe ụfọdụ. Ọ bụrụ na ị hụtụbeghị snow tupu ndụ gị, nke a bụ ezigbo ohere. Mana ka m gwa gị ihe gbasara snow, tupu ị gawa ịtụ snow n'ihu ịhụnanya gị. The snow, n'agbanyeghị na-ada na flakes, nwere ike sikwuo ike, ma ọ bụrụ na ị na-eme a snowball ịtụba onye ọzọ ọ ga-aghọ ihe ice obi ụtọ. Ọ nwere ike bụrụ ihe na-afụ ụfụ, mepee akara aka n'ihu ịhụnanya gị. Yabụ, iji mebie njem ahụ, kpachara anya na igwu egwu na snow. Cheta, ọ nwere ike gbanwee ghọọ okwute ma merụọ ezigbo ahụ. Otú ahụ ka ọ dịkwa ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbanye snow n’elu ugwu ahụ. Mmetụta snowball na-abawanye. Lelee ihe ị ga-eme na snow ahụ hụrụ?
Phew, enweghị m ike ikweta na ihe a niile! Ọ bụ ya mere o ji dị mkpa ịse foto, ị maghị ma afọ iri gafee, ị ga-achọ iwepụta blog njem ma chọọ ya. N'ọnọdụ ọ bụla, ha bụ nnukwu ncheta. Daalụ maka ịmeela ihe a. Echefula iso anyị na bọtịnụ na-acha uhie uhie n'ebe ahụ. 👉
Ma ọ bụ pịa ụwa anyị dị n'okpuru ebe a iji gụkwuo na kwarantaini a gọziri agọzi, yabụ ị nwere ahụ ike mgbe oria Coronavirus a gwụchara. (Then ga - enwe ike ịga njem ọzọ!)
Olee otú Argentina Bariloche chocolate Ugwu Andes Olee otú mmanya
Römulo Lucena	Ele niile →
Jikọọ 139 ọzọ ndị debanyere aha
Agara m mba 36 United Nations (17.61%) na ngụkọta nke 193.